Global Voices Podcast: Sakafon-tsaina, Sakafo Hohanina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Mey 2012 3:18 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, Ελληνικά, English
Arahaba ry Tontolo!
Arahaba tonga soa ato anatin'ity andiany vaovaon'ny Global Voices Podcast ity.
Voalohany indrindra, Silvia Viñas mpamoaka lahatsoratra any amin'ny faritra Amerika Latina, dia nikaroka mismisy kokoa ny fandikàna teny anaty Tranonkala. Ny Intercontinental Cry dia gazety miainga eny ifotony natao ho an'ny hetsika manerantanin'ireo vazimba teratany, manome vaovao, lahatsary, fanangonan-tsonia, fanehoan-kevitra sy hetsika fanairana. Ny teny Espaniola no nanombohana ilay tranonkala teo aloha teo, ka dia niresaka mivantana tamin'ny alalan'ny aterineto tamin'i Alex Cacherino-Gorman , Toniandahatsoratra sy Mpiandraikitra fanontàna i Silvia mikasika ny hanapariahana ireo vaovao ho amin'ny teny samihafa.
Dika iray teo aloha avy amin'ilay podcast no nilaza fa i Silvia Viñas dia niresaka tamin'i John Ahniwanika Schertow. Ny marina dia niresaka tamin'i Alex Cachinero-Gorman tonian-dahatsoratry ny Intercontinental Cry amin'ny teny Espaniola i Silvia
Ireo vao avy nahazo ny fanohanan'ny Rising Voices
Tamin'ny volana lasa izahay nanambara tetikana enina vaovao tohanan'ny Rising Voices, avy ao Goatemala, Etazonia, Paragoay, Palestina, Pero ary Myanmar. Ireny tetikasa vaovao nirotsaka nanatevin-daharana ny vondrom-piarahamonintsika ireny dia samy handray fnanmpiana kely avy mba hanatanterahan-dry zareo ny zavatra noeritreretiny.. Fiarahabana manokana ho an'ireo rehetra mahazo izany!
Beatrice Catanzaro dia mpanakanto amin'ny sehatry ny hita maso ary iray amin'ireo vaovao manampy isa ny vondrom-piarahamonina Rising Voices amin'ny tetikasany, Food Tales from Nablus, na Ny Tantaran'ny Sakafo Avy Any Naplouse. Miaraka amin'ny namany Fatima manome tànana azy, izy dia miara-miasa amin'ireo vehivavy avy any afovoan'ny tanàna fahagolan'i Naplouse, ao Palestina, mba hankalaza ny fahaiza-nahandron-dry zareo. Singa isan'ny iray lehibe amin'ny tetikasan-dry zareo ny hanangana sekoly fampianarana nahandro ho an'ireo vahiny mpitsidika izay hampiasa ireo vehivavy eo an-tanàna ho toy ny lehibe mpiandraikitra sy mpanofana. Mba hahafantarantsika bebe kokoa momba ny tetikasan-dry zareo dia miresaka amin'ireo vehivavy roa mahazendana ao ireo isika.
Sakafo miampita sisintany
Raha misy zavatra iray tianay hifampizarana miaraka eto amin'ny Global Voices – ankoatry ny vaovao sy tantara – dia ny sakafo izay. Amin'io 2-3 Jolay io, dia ho any amin'ny Vovonamben'ny Global Voices 2012 any Nairobi, Kenya, izahay ary dia ho fifaliana ny hihaona, hiresaka ary hiara-misakafo amin'ireo namana rehetra maneran-tany.
Gustavo Arellano, mpamoaka lahatsoratry ny OC Weekly ao amin'ny Orange County, California sady mpanoratra tao ambadiky ny ‘Ask a Mexican‘ na ‘Meksikana anontaniana’, ao anatin'ny bokiny vaovao, Taco USA, dia nanao fitsangatsanganana ara-tsakafo mba hijery izay nahatonga ny sakafo Meksikana ho lasa malaza any Etazonia. Journalist, producer and blogger, Cyrus Farivar mpanao gazety, mpamokatra sady bilaogera dia niresaka tamin'i Gustavo mikasika ny tsiro sy hanitra tafita any ambadiky ny sisintany.
Mexican Food ao amin'ny 1806 Haight St any San Francisco, California. Sary an'i Rupert Ganzer tao amin'ny flickr (CC BY-ND 2.0)
Antenainay fa nankafizinao ity andianà Podcast iray ity. Ary toy ny mahazatra dia mankany amin'ireo rehetra mpiara-miasa aminay sy ireo natao fanadihadiana ny fisaorana lehibe indrindra, ary indrindra fa ho an'i Yazan tamin'ny fiarahana mahafinaritra sy mpiara-manolotra nahafatra-po azy. Na resaka sakafon-tsaina io, na zavatra hohanina, eo hatrany ny vondrom-piarahamonina Global Voices hitatitra azy.
Ny Podcast an'ny Global Voices , miteny izao tontolo izao, antenainay fa mihaino ianareo!
Nanome ny Mozika lafika
Ao anatin'ilay podcast dia mandre hira maro mahafinaritra mampiasa ny Creative Commons ianareo. Fisaorana ho an'i Mark Cotton tamin'ny asa famokarany ary fisaorana koa ho an'ireo feo lafika mahafinaritra rehetra sy ireo ‘clips’ izay nanampy tamin'ny fanambàrana ny podcast ho iray.